Iindaba-Uyiqhagamshela njani i-gamepad ephathwayo kwifowuni ephathwayo?
Indlela yokudibanisa i-gamepad ephathwayo kwifowuni ephathwayo?
Amanyathelo okudibanisa isiphatho somdlalo weselula kwifowuni ephathwayo ngala alandelayo:
1. Vula i-bluetooth interface yefowuni ephathekayo, vula i-bluetooth, ifowuni yeselula iya kungena ngokuzenzekelayo kwimeko yesixhobo sokukhangela. Ukuba inkqubo yefowuni ephathwayo ayikhangeli ngokuzenzekelayo isixhobo, unokucofa iqhosha elithi “Khangela Isixhobo” ngezantsi.
2. Cinezela kwaye ubambe iqhosha elithi "LOGO" + "X" iqhosha lesilawuli somdlalo, umlawuli ungena kwisimo sokulinda seBluetooth, kwaye ukukhanya kwesalathisi ngakwesokudla phezulu kweqhosha le-LOGO lihlala likhanya.
3. Unokukhulula isiphatho ngokubonisa "BETOP BFM GAMEPAD" kwifowuni. “BETOP BFM
"GAMEPAD" ligama lesiphatho, cofa ukudibanisa. Emva kokuba uqhagamshelo luphumelele, iqhosha elithi "LOGO" lidanyaza kwaye ukukhanya kuhlala kukhanya. Xa isibambo sidityaniswe nefowuni ephathwayo, ngexesha elizayo xa isibambo sivuliwe, siya kuxhuma ngokuzenzekelayo kwifowuni ephathekayo. Inyathelo lesi-2 ngasentla lingatsitywa, kwaye kuphela iNyathelo loku-1 elifunekayo. Vula nje iBluetooth.
4. Emva kokuba isibambo siqhagamshelwe ngempumelelo, unokulawula ngokuthe ngqo ifowuni ngesibambo. Cofa amaqhosha aphezulu nasezantsi kwi-handle, ifreyim eluhlaza iya kuvela kwiscreen sefowuni, unokucofa ngokuthe ngqo iqhosha elithi "A" ukuze uqinisekise, kunye neqhosha elithi "B" ukukhansela.